1. Izithako ezinika zombini incasa emnandi kunye nencasa Zingenziwa kwisitya sokutyikitya esiza kuthandwa ngumntu wonke, njenge spaghetti, isaladi, okanye isidlo sakusasa esimnandi. Ingakumbi xa kuphela unyaka Ngoobani abazokwenzela itheko endlini Namhlanje sinendlela yokwenza ubhekeni usebenzisa i-oveni ukongeza crisp, emnandi kwaye inuka kamnandi kwizindlu ezintathu, izindlu ezisibhozo. Ngemenyu etyebile ngeprotein kunye namafutha ukonwabela imozulu epholileyo sebenzisa nje i-oveni elula ukufumana ukutya okanye izithako zokuhamba nesifundo esiphambili.
2. Yintoni ibhakoni? Abantu abaninzi abazi okwangoku !! Kungenxa yokuba ibhekoni yenziwa kwisisu sehagu Kodwa yongezwa emva kokunyulwa kwesaliti kunye nokushiya ixesha elithile. Ebizwa ngokuba yongezwa okanye yongezwa kulondolozo lokutya ukuze uhlale usitya ixesha elide. Kuphela ngamanzi, ityuwa, iswekile, i-nitrite yesodiyam kunye ne-sodium ascorbate ezona nkqubo ziphambili zolondolozo zisetyenziselwa ukuvelisa inyama enevumba elimnandi. Lawula iqondo lobushushu kwaye ulishiye de libe selikho Izixhobo ezisetyenziselwa ukubhaka Bacon • Bacon ekumgangatho ophakamileyo
3. Beka izilayi zebhekoni kwisitya okanye kwisitya sokubhaka. Ngokutyhila ibhekhoni ukuze inyama isongwe okanye isale ngesinye isiqwenga Ukufumana ubushushu kuyo yonke ipleyiti Ingabekwa ngaphezulu kwefoyile yealuminiyam esetyenziselwa ukupheka. Ukucoca ngokulula
4. • Beka isitya sebhekoni esilungisiweyo ehovini. Emva koko beka iqondo lobushushu ku-205 • • Bhaka ibhekhoni kwicala lokuqala imizuzu eli-12 ukuya kweli-15. • Guqula ibhekhoni kwelinye icala. Emva koko faka ehovini ngeli xesha linye
5. Ucocekile, mhle, thatha amalungiselelo epleyiti
6. Imenyu emnandi esebenzisa ibhekoni ehovini ngokugqibeleleyo kwaye ngokulula inokudliwa njengesibheno esingenanto ngenxa yetyuwa, ioyile, incasa eswiti encinci kunye nevumba leenkuni ezivela emsini. Sisibheno esinzulu. Bayifaka kwisonka, itshizi kunye nemifuno abayithandayo yiVanwich Bacon abantwana abangasoze bayilibale. Yifake kwisaladi yemifuno kwaye ungeze itshizi, yisaladi kaKesare, isitya esimnandi entliziyweni yakho. Nciphisa i-spaghetti carbonala Yongeza ukuthamba kokutya okuthandwa ngumntu wonke kunencasa engcono, nangona kunjalo, ibhekoni kukutya okunamafutha aphezulu. Ukutya ngokumodareyithi kuyanceda emzimbeni. Kodwa ukutya kakhulu Ngokuqinisekileyo kuya kuba nefuthe elibi Masenze izitya ezimnandi Kunyaka wepateni, ukusuka kwendlela elula ebhakwe nge-oveni, ivumba levumba lisasazeka, longeza ubushushu kunye neenkumbulo zeholide.